Jowhar.com : Somali Leader News - News: Banaan bax ka dhacay Kaxda oo looga soo horjeestay ka saaristii degmooyinka G/Banaadir
Banaan bax ka dhacay Kaxda oo looga soo horjeestay ka saaristii degmooyinka G/Banaadir
Banaan bax ballaaran oo cabasho ahaa ayaa maanta ka dhacay deegaanka Kaxda oo dhowaan Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ka saaray ka mid ahaanshihii degmooyinka Gobolka Banaadir, kadib markii Madaxweynihii hore uu u aqoonsaday in Kaxda ay noqoto degmo ka tirsan Gobolka Banaadir.
Banaan baxan oo ay ka qeyb galeen boqolaal ruux oo isugu jira, dhalinyaro, haween, odayaal iyo culumaa'udiin ayaa looga soo horjeestay tallaabadii uu Gudoomiye Muungaab uga saaray degmadaas degmooyinka Gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha Kaxda Cabdi Yuusuf ayaa sheegay in xaqii degmadan ay laheyd, isagoo ugu baaqay Madaxda dowladda inay jawaab cad ka bixiyaan arrintan, kadib markii laga saaray shir Gudoomiyeyaasha degmooyinka ay lahaayeen.
Qaar ka mid ah dadkii banaan baxayay ayaa sheegay in aanay jirin dowlad dadkeeda mucaarad ku ah, balse aan wali la arkin degmo mucaarad ah, waxaana ay ugu baaqeen madaxda dowladda in deg deg loo soo fara geliyo.
Mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in looga baahan yahay in dowladda ay dhowrto federaalka, isla markaana degmada Kaxda uu horay degmo uga dhigay Madaxweynihii hore Sheekh Shariif.
Gudoomiyaha Kaxda ayaa in muddo ah ka qeyb galayay shirarka Gudoomiyeyaasha degmooyinka, xilligii uu xilka hayay Gudoomiye Tarsan, waxaana Kaxda ay ku aheyd tirada degmooyinka Gobolka Banaadir degmada 17aad.
Si kastaba ha ahaatee banaan baxan ayaa ku soo beegmaya, iyadoo beesha Kaxda degta ay aad uga caroodeen go'aan Gudoomiyaha Gobolka Banaadir uu ku diiday ka mid noqoshada degmooyinka Gobolka Banaadir, iyadoo aanay wali jirin hadal rasmi oo ka soo baxay Wasaarada Arrimaha Gudaha iyo Federaalka dowladda Soomaaliya.
master on March 29 2014
Jowhar.com730,117 unique visits